Meicet - Iprofayile yeNkampani
I-Shanghai May Skin Information Technology Co., Ltd. ngumboneleli wenkonzo yetekhnoloji yobuhle obukrelekrele ezinikele kubuhle be-R&D kunye neqonga le-Intanethi yeZinto zokuSebenza.Uphawu lwayo “MEICET” lugxile ekwenziweni ngokwezifiso kunye nokwabelana ngolwazi lobuhle bezonyango kunye nohlalutyo lolusu lwedijithali, olubonelela ngeenkonzo ezigqwesileyo zehardware ezikrelekrele kunye nezisombululo zobukrelekrele bokwenziwa.
Emva kweminyaka eyi-12 yomsebenzi onzima, inkampani ibambelela kwingqikelelo yemveliso "yentliziyo elungileyo, ukucinga okulungileyo" ukuqinisekisa umgangatho ophakamileyo we-pf nganye yekhonkco lemveliso kunye necandelo, izama ukunyusa amava akrelekrele omsebenzisi.
I-multi-spectral high-precision ye-skin analyzer eyenziwe yi-MEICET ngo-2013 ifumene uphando oluninzi lwezenzululwazi kunye nonyango lwezonyango ekhaya nakwamanye amazwe.
I-MEICET ithatha "uqhelaniso lwetekhnoloji, inkonzo ephezulu, uphawu lwehlabathi jikelele" njengentanda-bulumko yoshishino, ikhawulezisa isantya seshishini lilonke ukungena kubukrelekrele bokwenziwa kunye nexesha lokusebenza kweqonga le-Iot.
Ngokudityaniswa okugqibeleleyo kweemveliso, izixhobo, umthengi kunye nedatha yabaqhubi, umgangatho, ubukrelekrele, kunye nokufakwa kwedatha kunokwenzeka.Kula mahla ndinyuka, i-MEICET iyaqhubeka nokwenza izinto ezintsha, isakha i-ecosystem yeshishini egxile kubuchwephesha bobuhle obukrelekrele, ikhuthaza uphuhliso olusempilweni nolucwangcisiweyo loshishino lobuhle.
"Gxininisa kumgangatho, ukugcina ukudala", sihlala sinyanisekile kwindlela engaphambili.
Yiba ne-MEICET, kwaye wabelane ngekamva.
Umzi-mveliso wamazwe ngamazwe
Ukuhlolwa kwe-100% ye-QC ngaphambi kokunikezelwa
Best ixabiso isiqinisekiso
Njengenkampani ezimeleyo yokuvelisa itekhnoloji yolwazi kunye nehardware, sinefektri yethu yokuvelisa, inokuqinisekisa ukukubonelela ngeyona nkonzo inexabiso eliphantsi.
Njengenkampani yetekhnoloji, sizenzele ngokuzimeleyo asethi zetekhnoloji ezikhokelayo kwaye safumana amalungelo awodwa omenzi wetekhnoloji
Emva kweminyaka eyi-12 + yokusebenza nzima, ukudityaniswa okugqibeleleyo kweemveliso, izixhobo, umthengi kunye nedatha yabaqhubi, ukubekwa emgangathweni, ubukrelekrele, kunye nokugcinwa kwedatha kunokwenzeka.